Waukesha, Wisconsin, Maarso 27, 2020 / PRNewswire / - Koronto la’aan soo foodsaartay Xeebta Bariga ilaa Xeebta Galbeed ayaa horseeday baahida sii kordheysa ee dhaliyaha keydka guryaha. Kordhinta biilasha korantada1, GeneracⓇ Power Systems (NYSE) kormeerkeeda tamarta cusub PWRview trans otomaatiga tooska ah ...
ITProPortal waxaa taageera dhagaystayaasheeda. Markii aad wax ku iibsaneysid xiriiriye websaydhkeenna, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar la leh. Waxbadan Ka Baro Hadda oo aan haysanno Internetka Teknolojiyada Gawaarida (V2X), waxaan ku faraxsanahay isdhexgalka tikniyoolajiyadda 5G iyo xalalka softiweerka baabuurta t ...
“Smart Grid” ayaa shidi doona “Smart Sudian”
Guud ahaan marka laga hadlayo, "smart Soviet power" iyo "smart grid" waxay umuuqdaan kuwo aan shuqul isku lahayn. Haddaad si macno leh u eegto, labada eray waxay leeyihiin “caqli” ay wadaagaan. Oo aan jaleecno dulucda shirkadda “Smart Sudian˙ Happiness iyo P ...
Isbedelka horumarka iyo Rajada rajada qalabka korontada danab hooseeya
1. isdhexgalka tooska ah Haddii soo saaraha lagu qeexo inuu yahay soo saaraha qaybaha korontada ku shaqeeya ee hooseeya, iibsadaha ugu weyn ee alaabada korontada ku shaqeysa waa warshad qalabkeedu dhameystiran yahay. Kuwani isticmaalayaasha dhexdhexaadka ah waxay iibsadaan qaybaha korontada ku shaqeeya ee hooseeya, ka dibna isku urursada ...